Baanglaadedh keessaa har’a yoo xiqqaate uummanni 50,000 ta’u daandii magaalaa galma mootummaa Daakaa irratti bauu dhaan prezidaantiin Ferensaay Imaanu’e Makroon kanneen Islaama qeeqan ilaalchisee walabummaan yaada ofii ibsachuu kan isaan jedhan balaaleffatanii jiru.
Hriirtonni mormii kun meeshaalee Ferensaay akka biyyattii hin seenne kan fedhan yoo ta’u embaasii Ferensaay kan gamasii fuulleetti hiriiruu yaalanis poolisii dhaan dhorkaman. Ferensaay Baanglaadesh waliin michuu daldalaa fi adda durummaan deggersa kan gootuuf biyya barbaachistuu dha.
Qindeessitoonni hiriirtonni mormii kun kuma 100 ta’u yoo jedhu poolisiin garuu 50,000tti tilmaamee jira. Maakroon Ferensaay mirga namoonni suraa kaasuuf qaban hin mulqitu jechuun addunyaa musliimaa biratti aarii bobeessee jira. Yaadi isaanii kun kan dhaga’ame erga barsiisaa Saamu’eel Paatii ka jedhaman baatii onkoloolessaa keessa kaartoonni nabi Muhaammad barattootatti agarsiisanii booda.
Sanaan booda kan angawoonni haleellaa shororkeessotaa jedhan lama geggeessamuun illee ibsameera. Maakroon sambata darbe al-jazeera waliin gaaffii fi deebii geggeessaniin gadduu isaanii ibsanii garuu walabummaan dubbachuu isa jedhu cimsanii yaadachiisaniiru. Namoonni kaartuunii sanatti rifachuu isaanii nan hubadha garuu hookkarri sirrii dha isa jedhu qaruma hin simadhu jedhan.